အဖွူရောငျ အိမျလေးတလုံး: March 2009
...................မနေ.က မှတ်တမ်း တင် ဖြစ်ခဲ.သော Topayoh ကျောင်းနှင်.
......................................ကြည်ညိုဖွယ် ရာ စေတီတော်
ကျွန်တော် မနေ.က အကြောင်း အရာ လေး တစ်ခု ကိုပြော ပြချင်ပါတယ် ၊၊ ထုံးစံ အတိုင်း နမော်နမဲ. နိုင်လှ စွာသော ကျွန်တော် မှောက်ရက် လဲကျရသော အကြောင်း အရာလေး ပေါ.ဗျာ ၊၊
မနေ.က တနင်္ဂနွေ ဆိုတော. ရုံးပိတ်ရက် အပြင် ထွက်ဖြစ် တာပေါ.ဗျာ ၊၊ အခုရက် ဘယ် မှလည်း မထွက် ချင် ပါဘူး ၊၊ စိတ်ထဲ ဘာဖြစ်နေလဲ တော.မသိဘူးဗျ ၊၊ သိပ်မရွှင်ဘူး ၊၊ ဒါပေမယ်. မနေ.ကတော. သွားဖြစ် တာတွေ က ဘုရား နဲ. ဘုံကျောင်းကိုပါ ၊၊ ဒါကြောင်.လည်း သွားခဲ.တာ ၊၊
အိမ်ကနေ SBS 25 Bus ကား စီးပြီး AngMoKio ကို အရင် သွားတယ်ဗျ ၊၊ ပထမဆုံးက Topayoh တရုတ် ဘိုးဘိုး ကြီး နတ်နန်းကို ပါ ၊၊ အဲဒီကနေ MRT စီပြီး သွားမယ်ပေါ. လေ ၊၊ AngMoKio Bus Interchange ကနေ MRT station ကို Underpass ကနေ ဖြတ်သွား လို.ရတယ် လေ ၊၊ အဲဒီ လမ်း အကူးလေးမှာ ပေါ.ဗျာ ၊၊
ဖြစ်ချင်တော. မနေ.က ကျွန်တော် က Slipper ဖိနပ်လေး စီးသွား တယ်ဗျ ၊၊ ဟောင်းနေ ပြီဆိုတော. ထိပ်က ခြေညှပ် နေရာ က ကြိုးက လျော.နေပြီ ၊၊ သတိတော. ထားမိ ပါတယ် ၊၊ စပြီးအိမ်မှာ ထုတ်စီးထဲက ၊၊ ဒါပေမယ် . လွတ်လွတ် လပ်လပ် ပဲ သွား ချင်တဲ.စိတ်က စိုးမိုးနေတော. ဘာကိုမှထပ်ပြီး မစဉ်းစားချင်တော.ဘူး ၊၊ မဖြစ်လောက်ပါ ဘူးပေါ. ၊၊ ခပ်ဖော.ဖော.ပဲ တွေးပြီး အတည် ပြုလိုက်တယ် ၊၊
ကျွန်တော.ဘ၀မှာလည်း ဒီလိုပဲဗျာ ၊၊ မဖြစ်လောက်ပါဘူး ဆိုတဲ . အသေးအဖွား လေးတွေက အကြီးအမားတွေ ဖြစ်လာရတာ ၊၊ ပြသသနာ ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာတော. တွေးမိတာပဲဗျ ၊၊ ဒါပေမယ်. အဲဒီအချိန်မှာ အမှန်ကို မဆင်ခြင်နိုင် လောက်အောင် ၊ လုပ်ချင်တဲ. ဖြစ်ချင်တဲ. ဆန္ဒတွေက စိုးမိုးထားတော. ဘာကိုမှ မဝေခွဲ နိုင်တော.ဘူးဗျ ၊၊ မကောင်းမှန်း သိပေမယ်. ၊ ဆန္ဒတစ်ခု ရှိနေတော. ကိုယ် စိတ်ကို ဖော.တွေး ပြီး ၊ အမှန်တရားကို လျစ်လျုရှု တက်တာ လူသဘာဝပဲနော် ၊၊
Interchange ကအထွက် မှာ လှေကားထစ်လေးတွေ ရှိတယ်ဗျ ၊၊ လှေကားထစ်လေး တွေ ပြီးတော. Man Hole အဖုံး ၃ ခုလောက် ရှိတယ် ၊၊ မြောင်းသေးသေးလေးတွေဖြစ်နေတာ ပေါ.ဗျာ ၊၊ လမ်းလျှောက်လိုက် ရင် ဖိနပ်က နောက် ကျန်နေခဲ.တော. သတိထားနေတာပဲ ၊၊ မြောင်းလေးတွေ တွေ.တော. ဖိနပ်ထိပ် ၀င်သွား ရင် လဲကျသွား နိုင်တယ် ပေါ. ၊၊ စဉ်းစားပြီး လှမ်းနေရင်း ဖျတ်ဆို ၀င်သွား ပြီး မှောက်ရက်လဲတော.တာ ပဲဗျ ၊၊ သိတယ်နော် ၊ တွေးတယ်နော် ၊ စဉ်းစားမိတယ်နော် ၊ သတိထားတယ်နော် ၊၊ ဒါပေမယ်. နောက်ကျသွားခဲ.ပြီ ၊၊
စပြီးတွေး မိတည်း က အိမ်မှာ ဖိနပ် ပြောင်းစီးခဲ.ရင် ၊ ပိုပြီး သတိထား ခဲ.ရင် ၊ ပိုပြီး ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ၊ ဂရု ပိုစိုက် ခဲ.ရင် ၊ ဒီလို လဲကျမှာ မဟုတ် ဘူး ဗျာ ၊၊
လက်တစ်ဖက်က ပိုက်ဆံအိတ် နဲ. ရှင်ဆန္ဒာဓိက စာအုပ်လေး ကိုင်လို. ၊ လက် တစ်ဖက်က တယ်လီဖုန်း ကိုင်လို. ၊၊ လဲကျတာက လမ်းလယ်ကောင်မှာ ၊၊ ခြေလွတ် လက်လွတ် ၊၊ မှောက် ရက် ကြီး ၊၊ ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို. မရတော.ဘူး ၊၊ အလျှင်အမြန် ထိန်းပေမယ် . အရှိန်ကို မထိန်းနိုင်တော.ဘူး ၊၊ ညာဖက်လက်က ထောက် လိုက်လို. မျက်နှာနဲ. မြေပြင် တိုက်ရိုက် မထိသွားတာ ကံကောင်းတယ်ပေါ . ၊၊ နောက် ဒူးနှစ်ဖက် နဲ.ထောက်လိုက် လို. ရင်ဘက်နဲ. နှစ်ပါ.မသွားတာပါ ၊၊ ဒူးနှစ်ဖက်လည်း တော် တော်ပွန်း သွားတယ် ၊၊ ဘောင်းဘီတို ဆိုတော. ပိုစိုးသွားတယ် ၊၊ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ကို မှောက်ရက်လဲကျတာပါပဲ ၊၊
လူတွေကြားထဲ မှာဆိုတော. ၊ ရှက်ကလည်း ရှက် ၊ တော. မြန်မြန် လူးလဲ ထလိုက် ရပါတယ်၊၊ သွေးပူနေတုန်း တော. ဘယ်နေရာကမှ မနာပါဘူး၊၊ ဒူးခေါင်းနေ ရာ ပွန်းသွားတာနဲ. ၊ လက်နေရာ ပွန်းသွားတာ ပဲ ၊၊ မြန်မြန် ထပြေးခဲ.ရပါတယ် ၊၊ နောက် အဲဒီကနေ Topayoh က ဘိုးဘိုးကြီးနန်း သွား အမွေးတိုင် တွေဘာတွေ ပူဇော်ပေါ. ၊၊ နောက် အဲဒီကနေတဆင် . Topayoh မြန်မာ ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း ဆက်သွားတယ် ၊၊ ဘုရားကန်တော. ပြီး SBS 130 စီးပြီး Bugis က Kwan Inn မယ်တော် ကျောင်း ဆက်သွားဖြစ်တယ် ၊၊
လဲကျကာစ ၊ ရှက်ရှက်နဲ. လူးလဲထ ခဲ.လို. ဘာမှမဖြစ်ဘူး ထင်ပေမယ် . ၊ သွေးအေးလာတော. တဖြည်းဖြည်း နာလာတယ် ၊၊ စောင်.ကျတဲ. အရှိန်နဲ. လက်မောင်းရင်းက နာလာတယ် ၊၊ ဒူခေါင်းနေရာက လမ်းလျှောက်လို. သိပ်မကောင်း ချင်တော.ဘူး ၊၊ ထွက်လာ လက်စနဲ. ဆက်သွားနေရပေမယ်. စိတ်က မပါတော.ဘူး ၊၊ နောက် လိုအပ်တာလေး တွေ ၀ယ်ဖို. Musafa Center ကို ၀င် ၊၊ ခဏပါ ပဲ ၊၊ လူကနာနေပြီ ၊၊ နားချင်နေပြီ ၊၊
ဘ၀မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ ၊၊ ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး လို.ထင်ရတဲ. ကိစအသေး အဖွား လေးက အစ ပြု ပြီး ဘ၀တစ် ခုလုံးကို ပြောင်းပြန် လှန်ပစ် တက်တာကို တွေးမိ လာတယ် ၊၊ ဒီဖိနပ် ကို စီးရင် ၊ ဒီလို လဲကျ မယ်ဆိုတာ သိခဲ. ပေမယ်. ၊ လွတ်လပ်စွာ သွားချင်တာလေး တစ်ခုအတွက် နဲ. သိသိကြီးနဲ. မပြောင်း လဲနိုင်ခဲ.ဘူး ၊၊ မှောက် ရက် လဲကျကာမှ ဘယ်လိုကျားကန် ပေမယ်. မရတော.ဘူး ၊၊ မတားနိုင်တော.ဘူး ၊၊ အနည်းငယ် သတိလေး ရှိလို. လုံးဝ မှောက်ရက်ကြီး ကျမသွားပေမယ်. ၊ လဲကျခဲ.တဲ. အရှိန်နဲ. ခန္တာကိုယ် တစ်ခုလုံး နာကျင်နေပြီ ၊၊ ဘယ်လောက် ကြာကြာ ခံစားနေရ အုံးမလဲ ၊၊ ပျောက်သွားခဲ ရင်ရော ၊ ဒဏ်ဖြစ်ပြီး ကျန်နေအုံးမှာ မလွဲပါ ၊၊
အချိန်အခါ မရွေးပြန်ပေါ် လာနိုင်တဲ. ဒဏ်ဖြစ်နေ အုံးမှာ ပါ ၊၊
ဒါကြောင်. ဘယ်နေရာ ၊ ဘယ်ကိစမှာမဆို ပြသသနာ ဖြစ်နိုင်တယ် ၊ ဒုက္ခပေးနိုင်တယ် လို. ခံစား လာရရင် ၊ ဘာကိုမှ စောင်းဆိုင်း စဉ်းစား အချိန်မဆွဲ ပဲ အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်နိုင်ပါစေ လို. ၊၊ ကျွန်တော်. ဘ၀မှာ လည်း မှားမှန်း သိပေမယ်. မပြင်မိခဲ. တဲ. အတွက် ရခဲ.တဲ. ဒဏ်ရာတွေ ၊ ဒဏ်ဖြစ်နေဆဲပါ ၊၊ ဒါကြောင်. မှားမှန်းသိရင် အမြန်ပြင်နိုင် ကြပါစေလို. ................
ပြိုမလိုလို နဲ. မိုး
ရင်အေးအောင် မွှေးခဲ.ဘူးကွယ် ၊၊
ဟိုရှေးရှေးတုန်းကဆိုတဲ. " ကျေးပုံပြင် " ပုံပြင်လေးကို လူတိုင်း သင်ခဲ.ဖတ်ခဲ. ဖူးပြီးဖြစ် ပါတယ် ၊၊ သဘာဝ ဘေးဒဏ် တစ် ခုကြောင်. ကွဲသွားတဲ. ကျေးညီနောင် ၊၊ တစ်ကောင်က ပညာတက်တွေ ရဲ. လက်ထဲရောက် သွားပြီး လိမ္မာ ယဉ်ကျေးတဲ. ကျေးလိမ္မာ လေးပေါ. ၊၊ နောက်တစ် ကောင်က တော. လူဆိုး လူမိုက် တွေရဲ. လက်ထဲ ရောက် သွားပြီး ဒမြ ကျေးလေး ဖြစ်သွားတာ ပေါ. ၊၊
ဒီကျေး မိုက်လေး ဟာ လူဆိုး တွေဆီ မှာ တပည်. ခံပါရစေ ဆိုပြီး သွားခဲ.တာ မဟုတ် တာတော. သေချာ ပါတယ် ၊၊ ပြုပြင် ဖန်တီးလို. မရတဲ. ကံတရား ကို ဘယ်လိုများ တောင်းပန် လို. ရမလဲနော် ၊၊ သူလည်းဘယ် သွားချင်ပါ.မလဲ. အစတည်းက လူဆိုးတွေမှန်း သိခဲ.ရင် ၊၊ မကောင်း မှန်းသိ ခဲ.ရင် ၊၊ ဒါပေသည်. သူ.မှာရွေး ချယ်ခွင်. မရှိ ခဲ.ဘူးလေ ၊၊
အရည်အချင်း ရှိတဲ. ကျေးလေးပါ ၊၊
ခပ်ညံ.ညံ. ကျေးလေး မဟုတ် တာ တော.
သေချာ သည် ၊၊ တာဝန် တစ်ခုကို ကျေပွန
် အောင်ထမ်း ဆောင် နိုင်သည် ၊၊ ကျေးဇူးတရားကို သိတက်သည် ၊၊ တလုတ်စားဖူး သူ.ကျေးဇူးကို နားလည် သည် ၊၊ ရွေချယ် ခွင်.မရှိတဲ. ကံတရားကြောင်. လမ်းမှား ရောက် ခဲ.ပေမယ်. ၊ မကောင်းတဲ. လမ်း လျှောက်လှမ်း ခဲ.ရပေ မယ်. အသိ ဥာဏ်ရှိတဲ. ကျေးလေးပါ ၊၊ ကျေးကောင်းလေး မဟုတ်ပေ သည်. ကျေး တော် လေးတစ်ကောင်ပါ ၊၊
အဲဒီ ကျေးလေး လိုပဲ လောကမှာ မမှားချင်ဘဲ မှားနေ ရတဲ. သူတွေ ၊၊ မှားမှန်း သိပေမယ်. ဒီလမ်းကို ဆက်လျှောက် နေရတဲ. သူတွေ ၊၊ ရွေးချယ်ခွင်. တွေ ဆုံးရှုံးနေတဲ. သူတွေ အများ ကြီးပါ ၊၊ ဘ၀ဇာတ်ဆရာ အလိုကျပါလို. ပြောရမလား ၊ ကံကြမ္မာ ကြိုှးဆွဲရာ ကနေရပါတယ်လို. ဆိုမလား ၊၊ ရုန်းမထွက်နိုင် တဲ. နွှံထဲ မှာ နစ်နေသူတွေ ဒုနှင်.ဒေးပါ ၊၊ ဒါကြောင်. အခြေအနေတစ်ခုအတွက် ၊ ဘယ်အရေးမှာ မဆို ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုတဲ. "Environment " ကအရေးပါတဲ. တွန်းအားတစ်ပါ ၊၊ စိတ်မပါပေ မယ်. ကျရာနေရာ က ကပြအသုံးတော် ခံနေရတဲ. ဘ၀တွေ ကိုစာနာပေးရ မယ်လေ ၊၊
ဒါ.ကြောင်. ရေွးချယ်ခွင်. မရတဲ. ဘ၀တွေကို နားလည် ခံစား နိုင် ကြပါစေလို. ..............
ဆိုင်ဖွင်.ကာစ မအူမလည် ၊ သိမ်သိမ်ငယ်ငယ် ......
ဖောက်သည်ဆိုတာလည်းမရှိ ၊ မျှော်လိုက်ရတဲ.ဧည်.သည် ၊
စေတနာဆိုတာ ပဲရှိ ၊ ပညာဆိုတာ မရှိတော. တဖက်သား အသည်းခိုက်အောင်
မဆွဲဆောင်လိုက်နိုင်တာ တော.အမှန် ...........
စေတနာဆိုတာထက် ပညာဆိုတာလည်း လိုသားလား.........
စေတနာဖြူဖို.ထက် ပညာမြူဖို.လည်း လိုအပ်တယ်...........
လူမတက်ပေမယ်. လဖက်ထုပ်တက်တယ် ဆိုသလို
ကြားရ မြင်ရ တွေ.ရ ကြုံရ
တခါတလေ ရှုံးပေမယ်. ...............
အချစ် ကုန်သည်ကြီးတောင် ဖြစ်နေပါရော.လား .............
ကျွန်တော် လွန်ခဲ.တဲ. ၂ နှစ်လောက်တုန်းက ခံစားချက်လေးနဲ. ရေးဖွဲ.ထားတဲ. ဇာတ်လမ်းလေးပါ ပဲ၊၊ အဆုံးပိုင်းလေး ကိုနည်းနည်းလေး ထပ်ပြင်ထားတယ် ၊၊ ဒါပါပဲ ၊၊ ခံစားချက်တွေ မပြောင်းလဲသေးပါ၊၊ ခုချိန်ထိ ဒီအတိုင်းလေးပါ.........
ကိုဖိုးချို ကြိး နိုင်ငံခြား သွားတော့မည် ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားရတော့ အံ့သြမိတာ အမှန်ပါ။ ယုံလည်း မယုံပါ ။ ရန်ကုန်မြို.မှာ ၂၄-နာရီ မီးလာပြီ ဆိုတဲ့ စကားလို ဒီသတင်း ကျွန်တော်တို.ကြားမှာ ထူးခြားတာတော့ အမှန်ပါ။ ဘာဖြစ်လို. လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို.အသိုင်းအ၀ိုင်း တွင် ကိုဖိုးချို လောက်မြန်မာပြည် ချစ်တဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ကျောင်းပြီးလို.အားလုံး နိုင်ငံခြားသွား ကြတော့လည်း တုတ်တုတ် မျှမလှုပ်တဲ့ ကိုဖိုးချိုပါ။ သွားတဲ့သူတွေ ကိုတောင် မသွားဖို.တရားပြ နားချခဲ့လို. ကွယ်ရာမှာ ကိုဖိုးချိုကို ကိုမြန်မာချစ် လို. နာမည်ပြောင်ခေါ်ခဲ့ ကြတာပါ။ ( ရည်းစားနဲ.တောင် ကွဲထဲ.အထိ ၊ just put , new edit)
ကျောင်းပြီး ကတည်းက ဆောက်လုပ်ရေ: ၀န်ကြီး ဌာနက တံတား စီမံကိန်း တစ်ခု ကိုနေ.စားဝန်ထမ်း အဖြစ်ဝင်သွားခဲ့တာပါ။ အဆင်ပြေတာ မပြေတာထက် အလုပ်လုပ် ရရင်ပျော် နေတက်တဲ့ ကိုဖိုးချို ပါ။ ပိုက်ဆံမရလို. လည်း တ၀မ်းတခါး မလိုပါဘူးကွာ ဆိုပြီး နေခဲ့တဲ့ ကိုဖိုးချို ပါ ။ တကယ်ကိုမြန်မာပြည် ကိုချစ်တဲ့သူ။ မြန်မာပြည်မှာ ပျော်တဲ.သူ ၊၊ မြန်မာအချင်းချင်း မြန်မာလိုပြောရတာ ဘယ်လောက်များ အားရ စရာကောင်းလဲ မြန်မာ လိုခိုင်းလို. ရတယ် မြန်မာလိုဆဲလို. ရတယ်ကွာ လို.အမြဲတမ်း သူ.ကိုသူ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ အဖြစ် ဂုဏ်ယူ တက်သူပါ။ သူကတော့ နေနိုင်တာပေါ့ မိဘကိုလည်း ပြန်ပေးစရာမလို သူ.အိမ်ကတောင် ထောက်ပံ့ နေသေးတာပဲ လို.ကွယ်ရာမှာ အတင်းဆိုလည်း သူကတော့ ပြုံးပြုံးလေး ပါပဲ။
မြန်မာပြည်မှာပဲ လုပ်ကြဖို.၊ မဖွံ.ဖြိုး မတိုးတက်သေး တဲ့နေရာတွေကို လုပ်ပေးဖို. အမြဲ မဲဆွယ်နေတက် သူပါ။ တကယ်ကို အလုပ် လျှောက်ကြတော့ ကျန်တဲ့သူတွေက နီ:စပ်ရာ နေရာ ပြန်တောင်း ကြပေမယ့် ကိုဖိုးချိူ ကတော့ ပထမ ဦးစားပေး ၊ ဒုတိယ ဦးစားပေး ၊ တတိယ ဦးစားပေး အားလုံး စေလိုရာစေ ဆိုတဲ.သူ၊၊ ဝေးစမ်းပါစေ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ပါဆိုတဲ.သူ၊။ ပထမအလုပ်က ကလေးဝဆိုတဲ. စစ်ကိုင်းတိုင်း ဟိုးအဖျားနား ၊၊ နောက် မွန်ပြည်နယ်ထဲက စစ်တောင်းတံတား၊၊ နောက် ချင်းပြည်နယ် ဟိုးအစွန်က ဟုမ္မလင်း ၊ ခန္တီး ၊၊ ဟိုးဘက် က နန်.စလိန်ဆိုတဲ. နာဂတွေ ရဲ.ဒေသ တွေ၊၊ အခု နောက်ဆုံး မုံရွာ ဆိုတဲ.နေရာ က အိမ်နဲ. အနီးဆုံး ၊၊ ဒါတောင် သူအိမ်နဲ. မိုင် ၆၀၀ ကျော် ၊၊ ဒါပေသည်. အလုပ်လုပ်ရင်း ပျော်နေတဲ.သူ၊၊
ဒါပေမယ်. အခုနိုင်ငံခြား သွားတော.မယ်တဲ. ၊၊ ကောလဟာလ များလား၊၊ သေချာအောင် တွေ.ပြီး မေးချင်သည်၊၊ သူအိမ်ကို ဖုန်းဆက်တော. မုံရွာမှာတဲ. ၊၊ မုံရွာရုံးကို ဆက်တော. နေပြည်တော် ကို ACE နှင်. လေးလပတ် ပါသွားပါတယ်တဲ.၊၊ လူကြီးအချစ်တော် လက်စွဲ နိင်ငံခြား သွားမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါ လို. ဘာသာ တွေးမိသည်၊၊ ရန်ကုန် ၃၈ လမ်းက ကိုဖိုးချို ရဲ. အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းဆက်တော. သူ ရန်ကုန် ဆင်းလာမည်တဲ. ၊၊ လာခဲ.ပါလား ဆုံရတာပေါ.တဲ. ၊၊ မေးကြည်.တော. ထိုသူငယ်ချင်းက ရယ်နေသည်၊၊ '' I dont want to say anything " တဲ. ၊၊ ဒါဆို............
နှင်းမြူတွေစဝေနေပြီ ဖြစ်တဲ. နိုဝင်ဘာလရဲ. ညတညမှာ မြန်မာပြည်မှာ ကျန်နေသေးတဲ. လက်ကျန် သူငယ်ချင်း လေး အနည်းစု ဆုံဖြစ်ကြသည်၊၊ ဘီယာလေးသောက် ရင်းရင်တွင်းခံစား ချက်လေးတွေ ဖလှယ်ရင်း ပေါ.၊၊ အဲသည်ညက ကျွန်တော်တို. နောက်ဆုံး ဆုံဖြစ်ခဲ. ကြတာပေါ.၊၊ အမြဲတမ်း တက်ကြွပြီး စကားတွေ ဖောင်နေတက်တဲ. ကျွန်တော်.သူငယ်ချင်း ၊၊ တိတ်ဆိတ်လို.၊၊ တခွန်းမေး မှတခွန်းဖြေသည်၊၊ ဘီယာသေက်ရင်း ဝေနေတဲ. မျက်ဝန်းတွေ ၊၊ ဘီယာကြောင်.လား၊၊ မီးရောင် ကြောင်.ဖျတ်ခနဲ လက်သွားတဲ. မျက်ဝန်းအစုံ က ဝေ.သီနေတာ ဘာတွေများဘာလိမ်. ၊၊ အရင်လို တက်ကြွနေတဲ. မျက်ဝန်းအစုံ မဟုတ်တာတော.သေချာသည်၊၊
လူစုခွဲပြီး အိမ်မြန်ကာနီးတော. ကျွန်တော် သိချင်နေတဲ. မေးခွန်းလေးကို ကိုဖိုးချိုကိုအားနာနာ နဲ.ပဲ မေးလိုက်မိသည် ၊၊ ကျွန်တော်. မျက်နှာကို ကြည်.ပြီး လက်ကလေးနှစ် ဖက်နောက်ပစ်လို. ပြောပြနေတဲ. ကိုဖိုးချို စကားတွေက...
"ဘ၀မှာ လူတိုင်းကတော. ကိုယ်ရဲ.ရည်မှန်းချက်တွေ ၊ မျှော်လင်.ချက်တွေ ၊ အိပ်မက်တွေကို ပုံဖေါ်ချင် ကြတာပေါ.ဗျာ ၊၊ အဲဒီထဲ မှာမှ ကံကောင်းတဲ.လူ အနည်းစုက သူတို.ရဲ. အိပ်မက်တွေကို ပုံဖေါ်ခွင်. ရကြတယ်၊၊ တချို.ကတော. အိပ်မက်တွေကို ဒီအတိုင်းပဲ မေ.ထားလိုက် ကြတယ်၊၊ လူတချို.က အိပ်မက်တွေ ကို ပုံဖေါ်ဖို. ကြိုးစားရင်း ရုန်းကန်နေဆဲပဲ ...............
တစ်နေ.တော. ကျွန်တော် အိပ်မက်တွေ ................
လို.ပြောရင်း ဆူးလေလမ်းမကြီး တစ်လျှောက် ခေါင်းငုံ.လမ်းလျှောက် ပြန်သွားတဲ.ကိုဖိုးချိုရဲ. ကျောကိုကြည်. ရင်း တောက်ပတဲ. မျှော်လင်.ချက်တွေနဲ. တက်ကြွခဲ.တဲ. လူငယ်တစ်ယောက် အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်ပါစေလို. ဆုတောင်းပေးရင်း............................
ကျွန်တော် လွန်ခဲ.တဲ. ၂ နှစ်လောက်တုန်းက ခံစားချက်လေးနဲ. ရေးဖွဲ.ထားတဲ. ဇာတ်လမ်းလေးပါ ၊၊ ဒီအတိုင်းလေးပဲ တင်လိုက်ပါတယ်၊၊ Win Innwa ကနေ Zawgyi ပြောင်းပြီး တင်လိုက်ရုံပါပဲ၊၊ ဘာမှပြင် စရာ မလို ဘဲလည်း ခံစားချက်လေးက ဒီအတိုင်း ရှိနေဆဲပါပဲ၊၊
ညီမလေးနှင်းမာ တစ်ယောက်ဒီတစ်ခေါက်အိမ်ပြန် လာတာ မျက်နှာ သ်ိပ်မ ကောင်းပါ။ အဖေတို.အမေတို.ကို ကန်တော့ရင်း လာနှုတ်ဆက် တာလို. ပြောပါသည်။ ညီမလေး ဘယ်ကို များခရီး ဆန်.အုန်းမလို. ပါလိမ်.။ ဒီလို ကန်တော့ရင်း နှုတ်ဆက်တာ ဒီတစ်ခါ တတိယ အကြိမ် ဖြစ်သလို နောက်ဆုံး အကြိမ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မှတ်မိပါသေးသည်။ လွန်ခဲ.သော (၁၀)နှစ်ကျော် ကာလ ညီမလေး အသက် (၁၅) နှစ်ပြည်.ပြီးသည်. အချိန်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို. ရွာတွင် အထက်တန်း ကျောင်းရှိပေမယ်. ပြိးပြည်စုံသော သင်ကြားမှု မဖြစ်နိုင်ဟု ညီမလေးက ယူဆခဲ့ပါသည်။ ထို.ကြောင်.အထက်တန်း ပညာ ကိုမြို.ကျောင်းသို. သွားသင်ချင်သည် ဟုဆိုတော့သည်။ မိန်းခလေးက ဖြစ်ပြန်၊ မြို.မှာလည်း အဆက်အခံ ကလည်း မရှိပြန်တော့ စိတ်မချလို. တားမြစ်ကြသည်။ တကယ် ဘ၀ကို တိုးတက်ချင်ပါသည်ဆိုသည်.မ်ိန်းခလေး။ တားမရသည်.အဆုံးခွင်. ပြုခဲ.ရပါသည်။
ကျွန်တော်ကတော. (၉) တန်းအောင်ပြီးသည် နှင်. မိဘအလုပ် ၀င်၍ စီးပွားရေးဘက် ကူးခဲ့ရ၍ ပညာရေး မှာ ဝေးခဲ့ရသည်။ ထို.ကြောင့် ညီမလေး ကိုတော့ မြင့်မြင့်မားမား ပညာတက်မကြီး ဖြစ်စေချင်ခဲ့သည်။ ညီမလေးတော် ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကိုဂုဏ်ထူး တွေဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ရွာကျောင်းမှာ နေခဲ့သော ညီမလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကတော့ အောင်ရုံတော့အောင် ကြပါသည်။ ထို.ကြောင့် ညီမလေး အယူအဆ မမှားပါဟု ထောက်ခံမိပေမယ်. ထုတ်တော့ မပြောမိပါ။ တကယ်လို.ညီမလေး မြို.ကျောင်း သွားမတက် ရင်ရော ထူးချွှန်စွာ အောင်ပါ.မလားဟု ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်တော့ စဉ်းစားမိခဲ့ပါသည်။ ဒီလိုနဲ.ညီမလေး ရွာကိုမပြန်ဖြစ်ခဲ့တော့ပါ။ ပြန်ရင်လည်း အလည်အပတ် လောက်သာ လာတက် ပါတော့သည်။ ဘ၀တိုးတက်ဖို. ကျွန်တော်. ရင်ခွင်ထဲက ထွက်ခွာသွားတဲ့ ညီမလေးကို လွမ်းမိပါသည်။
ညီမလေး လိမ်မာပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ခလေးတွေ ကို (Guide ) ဟုခေါ်သော စာပြဆရာမလေး လုပ်ရင်းသင်တန်းတွေတစ်ခုပြီး တစ်ခု တက်သည်။ စက်မှုတက္ကသိုလ် တက်၍ အင်ဂျင်နီယာမကြီး လုပ်မည် ဟုပြောပါသည်။ ကျွန်တော်နားမလည်သော ဘာသာ စကား တွေပြောတက်တဲ့ ညီမလေးကို လေးလေးစားစား ချီးကျုးမိပါသည်။ ညီမလေးကံဆိုးပါသည်။ ခေတ်ကာလအခြေအနေအရ ကျောင်းပိတ်ကာလ နှင့်ကြုံတော့ တက္ကသိုလ် မတက်ခင် (၄)နှစ်လောက် နားနေ ရပါသည်။ ဒါပေမယ့် ညီမလေး အလကား မနေခဲ့ပါ။တဖက်က စာသင်ရင်းသင် တန်းတွေ တက်၍ တက်လမ်းရှာဖွေခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်တို. ဒေသမြို.ကလေးမှရန်ကုန်မြို.ကြီးသို. ပြောင်းရွှေ.အခြေချပါသည်။ ဤအကြိမ်သည်ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် နှုတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရွာမှာပြန်နေပါလား ညီမလေးရယ် လို.ဘာရယ် မဟုတ်ပြောမိတော့ ညီမလေးက ရယ်ပါသည်။ ဟုတ်တာပဲလေ သူလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေ တို.ရွာမှာမှ လုပ်လို.မရတာပဲလို. ဖြေရင်း လွမ်းရပါသည်။ ဒီလိုနဲ. တက္ကသိုလ်ပြီးလို. ဘွဲ.ရပြိး အင်ဂျင်နီယာမကြီး အဖြစ်အလုပ်ရပါသည်။ ကျွန်တော့် ညီမလေး ဘ၀အခြေကျပြီ လို့ဝမ်းမြောက် ၀မ်းသာ ပီတိဖြစ်ရပါသည်။
ညီမလေးရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြ ပေမယ့် အသိဥာဏ် နည်းတဲ့ ဗဟုသုတ မရှိတဲ့ ကျွန်တော် နားမလည်ပါ။ သူရတဲ့လခနဲ. မလောက်ငှ တဲ့အကြောင်း ပြောရင် ကျွန်တော်က မပူပါနဲ. ညီမလေးရယ် အစ်ကိုပို.မှာပေါ. လို.ပြောတော့ ငိုရှာပါတယ်။ ဘာကိုမကျေ နပ်မှန်း မသိပေမယ့် ညီမလေးကို ဖျောင်းဖျနား ချရပါတယ်။ ရောင့်ရဲပါလို.လည်း တရားချမိ ပါတယ်။ အခုလိုဌာနကြီးတစ်ခုမှာ ၊ စီမံကိန်းကြီး တစ်ခုမှာ တရားဝင်အလုပ် ရနေတာပဲ အစ်ကိုတို.က ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက် ပါပြီ၊ ဘာမှမလိုပါဘူး ၊ အမေတို.ဆိုရင် သူတို.သမီး ပညာတက်မကြီး အတွက် ကြွားရတာ အမောပဲ လို.ဆိုတော့ ညီမလေး ထပ်ငိုပါသည်။ ရှိုက်ကြီးတငင် ၀မ်း နည်းစွာ ငိုပါသည်၊၊ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပါ ။ ညီမလေးပြောတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ဘာသာ စကားတွေ ပိုပြီးမြင့် လာတာ သိပေမယ့် ကျွန်တော် နားမလည်ပါ။ ညီမလေးလိုလည်း မစဉ်းစား တက်ပါ။ ပ္မစည်းတစ်ခု ကို ၁၀၀ ၀ယ်ပြီး ၁၁၀ ရောင်းရင် ၁၀ မြတ်တာတော့ သိပါသည်။ ဒါပေမယ့် ညီမလေး ပြောတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ၊ ရပိုင်ခွင်.တွေ ၊ လိုအပ်ချက်တွေ ဆိုတာတော့ နားမလည်ပါ။
ဒီလိုနဲ. ညီမလေး ယခု တတိယအကြိမ် နှုတ်ဆက်ပြန်ပါသည်။ ပထမအ ကြိမ် နှုတ်ဆက် စဉ်က မိုင် ၂၀ ကျော် ဝေးတဲ့ ကျွန်တော်တို.နားက မြိုကလေး။ ဒုတိယ အကြိမ် နှုတ်ဆက်တော့ မိုင် ၂၀၀ ကျော် ဝေးတဲ့ ရန်ကုန်မြို.။ ညီမလေး ဒီတစ်ခါ နှုတ်ဆက်တာ တတိယအ ကြိမ်ပါ။ မိုင် ၂၀၀၀ နီးပါး ဝေးမယ်. နေရာတစ်ခု ဆီသို. ၊၊ ၁၅ နှစ် ၁၆ နှစ် အရွယ် မဟုတ်တဲ့ ၂၇-၂၈ အရွယ် ပညာတွေ အတွေ.အကြုံတွေ ပြည်.၀ နေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီမို. အထူးတော့ စ်ိတ်မပူ မိတော့ပါ။ လူဆိုတာ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ပြောင်းရွှေ.နေထိုင်ရတာ ပါပဲလေလို. ဖြေတွေး ရပါတယ်။ သမီးကို စိတ်မချတဲ့ အဖေ နဲ.အမေ ကို တရားနဲ. ဖြေဖို.ပဲ နှစ်သိမ့်ရပါတယ်။ ဘာကို စိတ်တို မှန်းမသိဘဲ တောက် ခေါက်ပြီး အံကြိတ်နေတဲ့ အဖေ့ကို လည်း ဖျောင်းဖျ ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော. နွားခြေရာ ခွက်ထဲက ဖားသူငယ်လို.ပဲ ပြော ပြော ဘာမှမသိ တဲ့မတွက် ဘာမှ မခံစား ရတာ အမှန်ပါ။ ညီမလေးလို ပညာတွေ တက်ခဲ့ရင် ညီမလေး လိုစိတ်ဒုက္ခတွေ ခံစားနေရ အုန်းမှာ အမှန်ပါ။ ကျွန်တော့် ညီမလေးကို ဒီထက်ပိုပြီး မသိစေချင် မတက်စေချင် တော့ပါ။ ပိုသိ ပိုတက်ရင် ကျွန်တော်တို.နဲ. ပိုဝေး သွားတော.မှာ သေချာပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညီမလေးကို မြန်မာပြည်မှာ ပဲ နေစေချင်ပါသည်။ ။
ချစ်ရဖန်များတော. အသည်းများလည်း ပန်းလှပြီ
လွမ်းရဖန်များတော. နှလုံးသားလေး နွမ်းလှပြီ ................
တခဏတာ အချစ်တွေ အထောင်အသောင်းထက်
တဘ၀တာ အချစ်လေး တစ်ပြားဖိုးပဲ တမ်းတတယ် .............
တညတာ အချစ်တွေ တပုံတပင်ထက်
တဘ၀စာ အချစ်လေး ပိစိလေးပဲ လိုချင်တယ် ................
အချိန်ရှိတိုင်း လွမ်းရပေါ. ၊၊
သတိယတိုင်း လွမ်းရပေါ. ၊၊
အနာဂတ်ကို တူနှစ်ကိုယ် ပုံဖေါ်
နားလည်မှုတွေ ဝေကာမျှ လို.
တခါတလေ လွမ်းရပေါ. ၊၊
ပျော်ပျော်ပါးပါး လွမ်းရပေါ. ၊၊
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေပါဘူးဗျာ၊၊ ချစ်သူကမုန်းဖဲကရှုံး ဆိုတဲ.ကိန်းဆိုက်နေတယ်၊၊ တကယ်ကို ချစ်သူက မဖြစ်နိုင်တော.လို.မေ.လိုက်ပါတဲ. ၊၊ လစာလေးကလည်းတိုးဘူးဗျ ၊၊ အလုပ်ကလည်း ပြောင်းထားတာ မကြာသေးတော.အသားကျဖို.ကြိုးစားနေတုန်း၊၊ Reject Letter လေးကလည်း လောလောလတ်လတ် အသစ်စက်စက် ၊၊ ရုံးသွားရတော.လည်း ဝေးလိုက်တာ စင်ကာပူ အရှေ.နဲ.အနောက်၊၊
မနက်လည်းအစောကြီးထလို.၊၊ အိမ်ပြန်ရောက်တော. မိုးကြီးကို စုးံစုံးချုပ်လို.၊၊ ညစာထမင်းတောင် ကိုလင်းဒီပ ကျေးဇူးနဲ.အဆင်သင်.လေးစားနေရတာ ၊၊(ကျေးဇူးပါ လူပျိုကြီး ရယ် ၊ ချက်ကျွေး ရမယ်.မိန်းမနဲ ညားပါစေ၊၊ ဟီဟိ..နောက်တာနော် ...)
ဘာများအဆင်ပြေတာ များရှိလဲဗျာ၊၊ ကံများညံ.ချက် တော. "" စကားပြောတော. ဆဲတယ်ထင် ၊ ပစည်းငှားတော.ခိုးတယ် ထင်"" ဆိုတဲ.ကိန်းမျိုးဆိုက်နေတာဗျ၊၊ သူငယ်ချင်းရေ နေကောင်းလား လို.နှုတ်ဆတ်တော. မရွဲ.နဲ. ၊ နင်.အပူလားတဲ. ၊ ဖြစ်ပုံပြောပါတယ်၊၊ တံခါးဖွင်.လိုက်တာ တစ်နှစ်လုံးသုံးလာတဲ. တံခါးလက်ကိုင် ကပြုတ်ကျတယ်၊၊ ရေချိုးမယ်လုပ်တော. Water Heater ကဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး၊ Power on လို.မရဘူး၊၊ လူထပ်ရှာလို.ရပါဘူးဆိုမှ အခန်းဖေါ် နှစ်ယောက်က ပြောင်းတော.မယ် Deposit ပြန်ပေးအခုတဲ.၊၊
အိမ်ပိုင်ရှင်ကလည်းနောင်နှစ်ချုပ်ဖို. Confirm လုပ်ပါတဲ. ၊၊ ပထမ ကုပ္မဏီက အခွန်သွင်းပြီးမှ လခထုတ်ပေးမယ်တဲ.၊၊ မလေးရှားကညီလုပ်သူကလည်း အဆင်မပြေဘူးတဲ.၊၊ ထွက်တုန်းက ချေးငှားထားတာလေးတွေကလည်း ပြန်ပေးတော.တဲ.တောင်းကြပြီ၊၊ ကံဇာတာ ဂြိုလ်စီးနေပုံများပြောပါတယ်၊၊
အဲဒီတော.ဘယ်မှလည်းသွားချင်ပါဘူးဗျာ၊၊ ဒါပေမယ်. ခလုတ်ထိမှ အမိတ ဆိုသလိုပဲ ၊ အဆင်မပြေတာတွေ များမှပဲ ဘုရားတရားကိုသတိယတယ်ဗျာ၊၊ဒါနဲ.ဒီတစ်ပတ်တော. ဘယ်မှမသွားတော.ဘဲ ၊ ဘုရားတွေပဲ သွားဖြစ်ခဲ.တယ်၊၊ဘုရားရိပ် တရားရိပ်က စိတ်ကိုအေး ချမ်းစေတာတော. အမှန်။ (လျှောက်လည်စရာ ချစ်သူမရှိတာလည်း ပါပါသည်..kwikwi ,ကြော်ငြာဝင်ပါသည်)
( ချစ်သူရှိသူများ ကရုံးပိတ်ရက်တွင် ချစ်သူနှင်.လျှောက်လည်ရ်ျ ချစ်သူမရှိသူများက ဘုရားသွားသည် ၊ Blog ရေးသည် ၊ တဲ. ဟီဟီ .....)
Bugis က Kwan Im Thong Hood Cho Temple
Photo : http://wikitravel.org/en/Singapore/Bugis
အတူတူ သွားတဲ. သူငယ်ချင်း က ဓါတ်ပုံ မရိုက်ကောင်းဘူးဆိုတာ နဲ. မရိုက်ဖြစ်ခဲ.ဘူး၊၊ ဒါကြောင်. Internet ကရှာပြီး ထည်.ထားတာပါ၊၊
Kwan Im ကျောင်းရောက်တော. ပန်းလေးပူဇော် ပြီး သူများတကာလို ဆုတောင်းဆုယူပြီး စာချတာပေါ.ဗျာ၊၊
အတူတူသွားတဲ.သူငယ်ချင်းက စာချတာ (Good ) တဲ. ဗျာ၊၊ ကျွန်တော် စာချတော.တစ်ခုက ( Medium ) တဲ. မဆိုးဘူးပေါ . ၊၊ ပျော် မလို ရှိသေး နောက် တစ် ခုမေးတော . ( Bad ) တဲ.ဗျာ၊၊ ဆက်ပြီးမမေးရဲတော.ဘူးဗျ ၊၊ လောလောလတ်လတ်လေး Reject Letter လေးရထားတာဆိုတော. ပိုဆိုးတာတွေ ကြားနေ သိနေရမှာ ဆိုးလို.၊၊
အခုတလော အသည်းကလည်း ငယ်နေတယ် ဗျာ၊၊ ဘာလေးဖြစ်ဖြစ် ရင်ဘက်ကြီး နဲ. ခံစားချက် အပြည်.နဲ ခံစားနေတယ်၊၊ ဒါကြောင်. မကောင်းတာဆို ဘာမှမကြားချင် ပါဘူးဗျာ၊၊ ခံစားပြီး ပူပင်သောက တွေဖြစ်နေရလို.၊၊
ဒါနဲ.ပဲဝတ်ပြု ဆုတောင်း ကန်တော. ပြီးမြန်မြန် ပြန်ထွက်လာခဲ.ရတယ်၊၊ မထွက်ခင်လေးမှာ ခုနက ရထားတဲ. ဟောစာတမ်း စာရွက် လေးတွေကို မီးရှို.ပြီး မကောင်းတာတွေ အားလုံးစာရွက် နဲ.အတူ ထားခဲ.ပြီး ပြန်လာခဲ.ပါတယ်၊၊
အဲဒီကနေဆက်ပြီး Toa Payoh ကိုဆက် သွားဖြစ်ခဲ.တယ်ဗျာ ၊၊ စိတ်ထဲမှာ ကြည်ကြည်လင်လင်မရှိတဲ.အခါ ဘုရားရိပ်တရားရိပ် ခိုချင်တာတော. အမှန်ပဲဗျာ၊၊ တကယ်ကို စိတ်ကို အေးချမ်းငြီမ်သက်စေတယ်၊၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွာကိုပြန်ရောက်သွားသလိုလဲ ခံစားရတယ်ဗျာ၊၊ ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ.ဗျာ၊၊
ကျောင်းအ၀င်မှာ ၀င်.၀င်.ထည်ထည် ကျက်သရေထည်ဝါစွာ
ကျောင်းအ၀င်မှ ၀င်.၀င်.ကြွားကြွား ခြင်္သေံ ကြီးများ
မြန်မာတို.ရဲ. အထိမ်းအမှတ် သူငယ်တော် နှင်. ကုသိုလ်တော်ခေါင်းလောင်း
ကျေင်းတော် တတိယထပ် မှ ရပ်တော်မူ ဗုဒ္ဒမြတ်စွာ
ကျောင်းတော် အပေါ်ဆုံးထပ် မှ ကြည်ညိုဖွယ် ရာ စေတီတော်
ကျောင်းအ၀င် လက်ဝဲဘက်ခြမ်း မှ ကျောင်းဆောင်ငယ်
အထွတ်အမြတ် ဗောဓိပင် နှင်. ဗုဒ္ဒမြတ်စွာ သပ္မါယ်စွာ
တကယ်ကိုအေးချမ်းတဲ နေရာလေးပါ ၊၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို.အတွက်တော. ရွာလေးပေါ. ၊၊ ရွာကလူတွေကိုတွေ.ရမယ်၊၊ ကံကောင်းရင် အမျိုးတွေနဲ.ပါတွေ.အုံးမှာ၊၊ အမျိုးသစ်တွေပါ တွေနိုင်ရနိုင်သေးတယ်ဗျ၊၊ ကံကောင်းရင်ပေါ.လေ(စကားချပ်) ၊၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောချင်ရာကို ရွာသားတို. ဘာသာဘာဝပြောလို.ရတယ်ဗျာ၊၊ ဘယ်လောက်ကောငိးလဲ၊၊
ကျွန်တော်တော. ပရိတ်လေးရွတ်လို. ဘုရားကိုပူဇော် ၊ ပုတီးလေးစိပ် ပြီး ညနေစောင်းမှာ ပြန်လာခဲ.တယ်၊၊
စိတ်ထဲမှာတော. တခဏလေးဖြစ်ဖြစ် ရှင်းသွားတယ်ဗျာ၊၊ ပေါ.ပါးသွားတယ်၊၊
တကယ်လို. အချိန်လေးများရ မယ်ဆိုရင် ဘုရားတော.သွားဖြစ်အောင် သွားပါဗျာ ၊၊ နိဗာန်ဆော် တာပါ ၊၊
အ်ိမ်လေးကို အလည်လာတဲ. အတွက် ကျေးဇူးပါ
၀မ်းလည်းသာတယ် ၊ ကိုယ်.အိမ်လေးက စုတ်စုတ် ဖတ်ဖတ်လေး ဆိုတော.
အားလည်းငယ်တယ် ၊ အားလည်းနာတယ် ..............
ကိုလင်းဒီပက မနေ.ညကကြော်ငြာတင်ပေးလိုက်မယ်ပြော တော.
နောက်နေတယ်ပဲ ထင်တာ ....................
နောက်တင်မယ်ဆိုရင် လည်း link လေးပဲတင် ပေးထားမယ်ထင်တာ
ဒါကြောင်.တင်လိုက်လေလို. ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ ပြောလိုက်တာ .................
လာလည်တာတွေ.ရတော. ပျော်လည်းပျော်တယ် ၊ နောက် အမှန်လည်းအားနာတယ် .................
ဘာမှပြည်.ပြည်.စုံစုံ မရှိတဲ.ကိုယ်အိမ်လေးကို ကျောင်းက ဆရာ၊ဆရာမ တွေနဲ. သူငယ်ချင်းတွေလာလည်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုနွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆို ကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် တကယ်ပါ .............
လိုအပ်တာများ ရှိရင်လည်း ထောက်ပြဝေဖန်အကြံပေးကြပါ လို. ....................
Shopping Mall ကြီးတွေမှာ
ဈေးဝယ်သွားပြီးပျော်ရတာ ဘ၀ လား ...........
Night Club သွားပြီးပျော် ရတာ ဘ၀လား ...............
အချိန်အားတဲ. အခါ သူငယ်ချင်းတွေနဲ.
အပျော် ရှာရတာ ဘ၀လား .................
တစ်ဆယ်ရင်း လို.နှစ်ဆယ် ရရင်
ဘာ က အမြတ် လဲ.................
ဆယ်တန်းအောင် ဖို. ကြိုးစားခဲ.ရတဲ. အချိန်တွေကို
ကျောင်းကြီးပြီးဖို. ကြိုးစားခဲ.ရတဲ. အချိန်တွေကို
အလုပ် ရဖို. ကြိုးစားခဲ.ရတဲ. အချိန်တွေကို
အခုတော. မျှော်လင်.ချက် မဲ. ကြိုးစားနေရတဲ. မနက် ဖြန်တွေကို
ဘယ်တော.များမှ ဆုံး ပါ.မယ်.............
ဒီနေ.ဖတ်ဖြစ်တဲ. My Paper4March ထဲက ဆောင်းပါးရှင် Mr Nelson Quah ရဲ. Internet နဲ.ပတ်သပ်တဲ. ဆောင်းပါးလေး ကို မျှဝေခံစားစေချင်လို. မူရင်းအတိုင်းလေး ပဲ ကူးယူ ဖေါ်ပြပေးလိုက် ပါတယ်..............
I refer to the letter ' Parents crucial in fight against cyber-bullies' ( my paper , Jan 20)
To help parents discharge their role effectively , more should be done to educate them on what cyber-bullying is all about.
Here are some measures which parents can teach theirs childern to prevent them from cyber bully-victims.
1.Do not provide your personal information online.
2.Do not disclose your password to anyone , expect your parent.
3.Do not respond toathreatening message .Bring it to your parents's attention.
4.Do not open e-mail from an anonymous sender orabully.
5.Do not put anything which can be used against you online .
6.Do not send message to anyone when you are angry. Consider how your recipients will react before sending them.
If left unchecked , cyber-bullying can lead to serious crimes such as threats , assaults , harassment and sexual exploitation. In such cases , the police should be informed.
It is high thme the authorities did something to protect Internet users, especially children, from falling prey to bullies.
Forastart , they can creat public awareness by launching programmes and campaigns against cyber-bullying.
ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဆောင်းပါးရှင် ရဲ. မူရင်းအတိုင်း ကူးယူဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်၊၊
ဖြစ်သင်.တာကိုဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာ မောင် နားလည်ပါတယ်.............
အလဲလဲအကွဲကွဲ ရှုံးနိမ်.နေဆဲပဲ ငယ်.............
ဒီအမှားတွေအားလုံး ဟာ မောင် . တစ်ယောက် မှာ သာ
ရုံးသွားရင်း ကားမှားစီး ရင် ပြန်ပြောင်းစီးလို.ရပေမယ်. လက်တွေ. ဘ၀ မှာတော. ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတစ်ခု မှားတာနဲ.ပေးလိုက်ရတာ က ဘ၀တွေ လေ.........
အဲသည်ဘ၀နဲ. ပတ်သပ် ဆက်နွယ်နေတဲ. ဘ၀တွေအား လုံး လည်းကစင်.ကလျားနဲ. စောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖြစ်ရတာပဲ...............
အားလုံးကို မေ.ပစ်ပြီး တစ်ကပြန်စရင် ရော .... ပြန်မရနိုင်တော.တာ က ၊ ပြန်ပြင်လို. မရနိုင်တော.တဲ. ရင်ထဲကခံစားချက်တွေ ၊ ဘယ်လိုအရာ နဲ.မှ အစားထိုးလဲလှယ်လို.မရတော.ဘူးလေ.....................
ဒါတွေကို သိသိကြီးနဲ. အမှားတွေကို ဆက်တိုက် ကျူးလွန်ခဲ.တဲ. မောင်. အတွက် ရလဒ် က နောင်တတွေ တပွေ.တပိုက် နဲ.ဦးတည်ချက်ပျောက်နေတဲ. လှေတစ်စင်းလိုပဲ.............
ဘယ်အချိန်မှာ အဆုံးသတ်မယ် မသိတဲ. ဘ၀ခရီးရှည်ကြီး တစ်ခုကို ကူကယ်မဲ.တဲ.လှေကလေးတစ်စင်း ဘယ်လောက်များလွင်.ချင်တိုင်းလွင်.နေအုံးမလဲ..............
တခါတရံတော.လည်း နီးစပ်ရာ ကမ်းလေးတစ်ခုမှာ ကပ်ပြီး ဘ၀ အမောတွေကို ချွှေးသိပ်ချင်ပါရဲ. .... ဒါပေမယ်. အပြစ်တွေ၊မကောင်းမူတွေတပုံတပင်နဲ. လှေငယ်လေးကို ဘယ် ကမ်းကမှ လက်မခံချင်ကြ တာ
ဒီလောကကြီး ရဲ.တစ်နေနေရာရာ မှာ လှေငယ်လေးအတွက် နားခိုစရာ ၊ ကမ်းကပ်စရာ နေရာလေးတော. ရှိတန်ကောင်းပါ ရဲ. ဆို တဲ. မယုံမရဲမျှော်လင်. ချက်လေးနဲ. ပဲ ဆက်လွင်.နေရအုံးမယ်...............
ဒီလိုလွင်.နေရတဲ. ကာလမှာစဉ်းစားဥာဏ်နည်းပြီး အရာရာကို ကြို မမြင်တက်တဲ. သဘာဝအတိုင်း ကမ်းထင်လို.ကပ်လိုက်မိတာက ဒိုက် ၊ကမ်းမဟုတ်တဲ. ဒိုက်တွေနဲ.တိုက် မိတဲ. အခါ ဘ၀ပင်လယ်ကျော မှာ မျောရုံ မက မြုပ်မသွားအောင် ကျားကန်ပြိး မရေရာတဲ.ဘ၀ခရီး ဆက်နေရတုံးပေါ......................
အမှန်တကယ်ကို တည်ငြီမ်တဲ.ဘ၀လေးနဲ. အေးချမ်းချင်လှပါပြီ ငယ်.....................
ဘ၀ကမောင်.ကို ဘယ်အချိန်ထိများ ဒဏ်ခတ်နေအုံးမလဲနော်........................
ထိုက်တန်တဲ. ဘ၀ကျိန်စာတော. မောင် လက်ခံမှာပေါ. ............................
လိုချင်တာဆိုဘယ်တော.မှမရ တဲ. မောင်.ရဲ. ဘ၀ပေး ကောင်းလေတော. ....................
ပွင်.လင်းတယ်၊၊ ရိုးသားတယ်၊၊ဖေါ်ရွေတယ်၊၊ဟန်ဆောင်မှူကင်းတယ်၊၊ ဖုံးကွယ်မထားတက်ဘူး၊၊ ပြောချင်တာကို စိတ်ထဲမှာရှိတဲ.အတိုင်းပြောတက်တယ်၊၊မကောက်ကျစ်ဘူး၊၊ မယုတ်မာဘူး၊တက်အားသရွေကူညီတက်တယ်၊၊ သူလိုအပ်ရင်လည်းပွင်.ပွင်.လင်းလင်း အကူအညီတောင်းတက်တယ်၊၊ အသားဖြူတယ်၊၊အရပ်မြင်.တယ်၊၊ရုပ်ချော တယ်၊၊ ဆွဲဆောင်မှူရှိတယ်၊၊ သူတပါးနားဝင်အောင်ပြေတက်တယ်................
လူတကာကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံတက်တယ်၊၊ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဝင်ဆံ.တယ်၊၊ဟန်ဆောင်လိမ်ညာမှူ ကိုမုန်တယ်၊၊ပွင်.လင်းတဲဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားတယ်၊၊ပညာတက်တယ်၊၊ဆွေဂုဏ်မျိုးဂုဏ်ရှိတယ်၊၊ အသိုင်း
အားနာတက်တယ်၊၊မပြတ်သားဘူး၊၊တွေဝေတယ်၊၊အထီးကျန်ဘ၀ကို မခံစားနိုင်ဘူး၊၊အနားမှာအဖေါ်တစ် ယောက်ရှိနေဖို.လိုအပ်တယ်၊၊ ဒါဟာ မြတ်နိုးမေ ရဲ. ပျော.ကွက်ပဲ..................
'''' ရည်းစားမများဖို. ကြိုးစားရင်း ရည်းစားတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ထားဖြစ်ခဲ.ပါတယ်"" ဆိုတဲ. မြတ်နိုးမေ ....................
"" တစ်ယောက်တည်းကို ချစ်ဖို.ကြိုးစားရင်း တစ်ယောက်ပေါင်းများစွာကို ချစ်ခဲ.ရပါတယ်ဆိုတဲ. ''''' မြတ်နိုးမေ................
"""""" ကံကြမ္မာက မတရားတာ လား ၊ မြတ်နိုးမေ က ဆန်းပြားတာ လား """""
ရည်းစားမများချင်ဘဲ မျက်နှာများခဲ.ရတဲ.ဘ၀က မခမ်းနားတာတော.အမှန်၊၊ ပွင်.လင်းတဲ. မြတ်နိုးမေ ၊၊
မဖုံးကွယ်တက်တဲ. မြတ်နိုးမေ ၊၊ လူတကာရဲ. ကဲ.ရဲ. ခြင်းခံရရှာ တဲ.မြတ်နိုးမေ၊၊ အတင်းအဖျင်းဆိုတာ မြတ်နိုးမေ အတွက် မဆန်းတော.ပေ၊၊ဒီလိုအကြောင်းမလှတဲ. ဘ၀ကံကြမာအလှည်.အပြောင်းတွေကြား ထဲက မြတ်နိုးမေ အထုအထောင်းတွေ များတော. ထုသားပေသားလည်း ကျခဲပြီ၊.......................
အရင်တုန်းက ချစ်တယ် ဆိုတဲ.စကား တခွန်းပြောဖို. နှူတ်မ၀ံ့သူ ၊၊ ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ.စကားကြားရင် ရင်ခုန်လို. မဆုံးတဲ.သူ၊၊အခုများတော. ချစ်တယ် ဆိုတဲ.စကား ပြောရဖန်များတော. CD ပြားဆိုပေါက် လောက်ပြီ၊၊ ကြားရဖန် များတော. ရိုးလှပြီ၊၊အရင်တုန်းက ပစ်ခွာသွားရင် အိပ်မရ စားမ၀င်၊၊ အခုများတော. Good Bye ဆို ရင် ပြုံး ချင်ပြီ...............
“”” ဘ၀ကပေးတဲ. သခန်းစာ လား ၊ မြတ်နိုးမေ ရဲ. ခံစားခွင်.လား “”””
“””” ရိုးသားဖို.ကြိုးစား ရင်း မရှိလို.ခိုးခဲ.ရတာပါ “”””””””” ဆိုသလို ပဲ
တည်ငြိမ်တဲ.ဘ၀တစ်ခုတည်ဆောက်ချင်ရှာတဲ. မြတ်နိုးမေ ၊ ဘ၀ခရီးကြမ်းကို ဘယ်အချိန်ထိများ တစ်ယောက် တည်း လျှောက်လှမ်းနေရပါအုံးမလဲ၊၊ အဖေါ်မရှိရင်မနေတက်ပါတဲ. မြတ်နိုးမေ ၊၊ အကျီကို နေ.တိုင်းလဲသလို အတွဲတွေများနေ.တိုင်းလဲနေမလား၊၊ လိုချင်တာလေးတစ်ခုအတွက် ပေးလိုက်ရတဲ.ဘ၀ တစ်ခုကို မြတ်နိုးမေ သတိမှပြုမိလေစွ……….
အတုအယောင်တွေများတဲ.လောကကြီးထဲမှာ ရင်တွင်းစကားဘယ်တော.များ ကြား ရရှာမလဲ………
ကြားခဲ.ရင်ရော ရင်ဘတ်ထဲက ခံစားယုံကြည်လက်ခံနိုင်ပါအုံး မလား မြတ်နိုးမေ…………..
မြတ်နိုးမေရဲ.ဘေးမှာ အရာရာကို နားလည်မှုအပြည်.နဲ.ရပ်တည်ပေးနိုင်မယ်.
ဘ၀လက်တွဲဖေါ်နှင်.အတူ အမြန်ဆုံးပြုံပျော်နိုင်ပါစေ လို………………….
မြတ်နိုးမေ သို. အမှတ်တယ………………..
ဒီနေ.ကျရောက်တဲ. ကျွန်တော်.ရဲ. မွေးနေ. ပွဲလေး ကို ရိုးစင်းစွာ ပဲကျင်းပခဲ.ပါတယ်၊၊ ဘုန်းတော်ကြီး (၃) ပါး ကို သင်္ကန်း လှူ ပြီး နေ.ဆွမ်းကပ်တယ် ၊၊ သူငယ်ချင်း တွေ နဲ. နေ. လည်စာ စား ဖြစ်တယ်၊၊ ဒါပါပဲ ၊၊ ဒီပွဲလေး ဖြစ်မြောက်ဖို. အစအဆုံး စီစဉ်ပေးတဲ.သူငယ်ချင်းတွေအား လုံး ကို တကယ် ကျေှးဇူး ပါ…………………..
သင်္ကန်း နှင်. လှူဖွယ်
ဘုရား အချို ပွဲ နှင်. ဆွမ်းတော်
ဓါတ်တော်တိုက်ဆရာတော်ဘုရားနှင့် သီရီလင်္ကာမှဆရာတော်များ ပရိတ်တော်များ ပူဇော်နေစဉ်
ဒီမွေးနေ.အလှူပွဲလေးအတွက် ဘုန်းကြီးပင်.တာကအစ ဆွမ်းချက်တာအလယ် ဆွမ်းကပ်တာအဆုံး အိမ်သန်.ရှင်းရေးပါမကျန် အစအဆုံး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ.သော
L Deepa နှင်.
Manoj Kumar တို.အား ကျေးဇူး ပါ.................
Nee W . Tun
C Tee နှင်. T. Wint တို.ကို လည်း ကျေးဇူး ပါ...............
ဒါပေမယ်. အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းကြောင်းများကြောင်.မစဖြစ်ခဲ.ဘူး…………
အခုတော.လည်း. အကြောင်းကြောင်းသော. အကြောင်းကြောင်းများကြောင်. ……………..
အမှတ်တယအဖြစ် ဒီအိမ်လေး ဖန်တီးဖြစ်ခဲ. ပါတယ်…………….
အဲဒီနေ.က မိုး မရွာဘူး၊၊ လေပြင်းတွေလည်းမတိုက်ခတ်ဘူး၊၊ နွေရာသီကုန်လွန်ကာနီး ဆောင်းရယ်လို.မပီပြင်သေးတဲ.တပေါင်းလရဲ. မနက်ခင်း လေးတစ်ခုမှာ ပေါ.၊၊ ထူးထူးခြားခြား သာယာလှပနေခဲ.တယ်၊၊
ဆောင်းမကုန်သေးတော. မနက်ခင်း လေးဟာ မြူနှင်းတွေလည်းဝေလို.ပေါ.၊၊
အဲဒီနေ့မှာ ထူးထူးခြားခြား လောကကြီးထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်။ ရက်ထပ်နှစ်များဖြစ်ခဲ့ရင် အဲဒီကလေးလေးရဲ့ မွေးလ ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၉) ဖြစ်ခဲ့မှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနှစ်က ရက်ထပ်နှစ်မဖြစ်ခဲ့ပဲ ဖေဖော်ဝါရီလက ၂၈ရက်နဲ့ သပ်သွားခဲ့တော့ သူ့မွေးနေ့က မတ်လရဲ့ ပထမဆုံးနေ့ ဖြစ်ရတော့တာပေါ့။ မတ်လ ၁ရက်နေ့က ကြာသပတေးနေ့ ၊၊ သူ့နဲ့ လောကကြီးကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့နေ့။ ဟောဒီကမ္ဘာကြီးထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့နေ့။ မိန်ရာသီဖွား စိတ်ကူးအင်မတန်ယဉ်တတ်တဲ့ ကလေးလေး။ မှားယွင်းမှုများစွာကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ကလေးလေး။ ဒီနေ့ဟာ အဲဒီကလေးလေး အတွက်မွေးနေ့။ ဘ၀တစ်ခုဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ နေ့။ မှတ်မှတ်ယယလူတစ်ယောက်အဖြစ် လော က ကြီးထဲကို စတင်ရောက်ရှိလာခဲ.တဲ. မွေးနေ့လေးပေါ့။
ဒီနေ.ဟာ လောကကြီးထဲကို စတင် ရောက်ရှိ ခဲ.တဲ. နေ. .....................
ဒီနေ.ဟာ သူ စိတ်ကူးယဉ် အိမ်ဖြူကလေး ထဲ က အ ပြီးထွက်ခွာသွားတဲ.နေ. .......................
ဒီနေ.ဟာ ဘ၀ရဲ. သက်တမ်းတစ်ခုကို ပိုင်းခြားပေးလိုက်တဲ. မှတ်မှတ်ယယ နေ.လေးတစ် နေ...................
အဖေရေ….. ဒီနေ့သားရဲ့မွေးနေ့ ။ ကလေးကနေလူငယ်၊ လူငယ်ကနေ လူလတ်ပိုင်းဆိုတဲ့ အရွယ်ကို ရောက်လာပြီ အဖေ။ဒီနေ့ဆို အဖေ့ကို ပိုပြီးသတိယမိတယ်။ သားသမီးတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး အရာရာကို အခုအချိန်အထိ ဖြေရှင်းပေးချင်နေတဲ့ အဖေ။ အဖေ အမြဲပြောတဲ့ “ကြက်သားအုပ်မကြီးလို သားသမီးတွေကို အခုအချိန်အထိရင်ခွင်ထဲမှာ အုပ်ထားချင်သေးတာ” ဆိုတဲ့ အဖေ။ အခုတော့ အဖေ့ရဲ့ သားသမီးတွေ အများစုက အဖေနဲ့ဝေးတဲ့ ဟိုးတစ်နေရာစီမှာလေ။ ဘယ်သူများ အဖေ့အနားမှာ နေပြီး ခြေဆုပ်လက်နယ်ပြုစုပေး နေနိုင်သလဲ။ နားလည်ပေးပါအဖေရယ်…. ......
သားသမီးတွေ အဝေးကို ထွက်ခွာသွားကာနီးတိုင်း ယောင်္ကျားကြီးတန်မဲ့ မျက်ရည်ဝဲပြီး ဆုပေးတတ်တဲ့ အဖေ။ ဘူတာရုံနဲ့လေယာဉ်ကွင်းတွေမှာ မမြင်ရတဲ့ အချိန်အထိ လက်ပြနှုတ်ဆက်လွမ်းနေတတ်တဲ့ အဖေ။ အဖေရေ… အဖေပြောသလို “ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရှာကြရမှာပေါ့” ဆိုတဲ့ ဆွေးဆွေးမြည့်မြည့် အသံကို အခုထိ ကြားယောင်နေဆဲပဲ။ “ငါ့သားရယ် အဖေပိုင်တဲ့ ဒီခြံဝိုင်းကြီးထဲမှာ သားတွေသမီးတွေ အားလုံးကို စုစုဝေးဝေးနဲ့ တစ်ယောက်စီ အိမ်ဆောက်ပေးပြီး နေစေချင်တာကွ” ဆိုတဲ့ အဖေ။ အခုများတော့ အိမ်ကြီးထဲမှာ အမေနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းပေါ့။ နားလည်ပေးပါ အဖေရယ်……......
မိုးသည်းတဲ့ ညတွေမှာ အဖေပြောပြနေကြ ပုံပြင်လေး သားအခုထိ သတိယနေသေးတယ်အဖေ။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန် အထိလည်း သား ပုံပြင်လေးအဆုံးသတ်ကို မသိသေးဘူး။ အဖေကလည်း ဆက်မပြောဘူး။ သားလည်း တစ်ခါမှ မှတ်မှတ်ယယ မမေးမိခဲ့ဘူး။ သားအမြဲ အမှတ်ယနေရာက “မိုးလေးက ဖြုတ်ဖြုတ် ဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ ရွှေဂျိုးဖြူနဲ့ မူလခဲ… သိုက်တံခါးအဖွင့်……”ဆိုပြီး အဖေ့ဇာတ်လမ်းလေးက ရပ်သွားရော။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်ရယ် အဖြေမသိဘူးအဖေ အခုအထိတော့ အဲဒီအပိုင်းအစလေးက ရင်ထဲမှာ စွဲကျန်နေတုန်း။...............
သားသမီးတွေကို စိတ်ဓါတ်မကျဖို့ အမြဲတမ်းအားပေးတတ်တဲ့ အဖေ။ တကယ့်ကို တစ်ခါမှ မဆူခဲ့ မမာန်တတ်တဲ့ အဖေ။ နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး စိတ်ချမ်းသာအောင် ပြောပေးတတ်တဲ့အဖေ။ မှတ်မိသေးတယ်အဖေ စာမေးပွဲဖြေဖို့ ခုံနံပါတ်တွေ ထွက်တိုင်းပြောတတ်တဲ့ စကားလေးတွေ။ ၁ဆိုရင် ထိပ်ဆုံးကပေါ့ကွ။ ၇ဆိုရင် Lucky7ပဲနေမှာတဲ့။ ၉ဆိုရင်လည်း ကိုးန၀င်းကြေပြန်သတဲ့။ အဲဒီတုန်းက အဖေ့ကို ပြန်ပြောမိတယ် အဖေကလည်း ဘာလာလာကောင်းတာချည်းပဲလို့။ ခုမှ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါဟာ အဖေက သားသမီးတွေအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာနဲ့ စေတနာပါလားလို့ သိမြင်လာရတယ်။ နှုတ်စကားလေးနဲ့တောင် မကောင်းတာ မဖြစ်စေချင်တဲ့ အဖေပါလားလို့။................
ပြီးတော့ ဘ၀မမေ့တတ်တဲ့ ကျနော့အဖေရယ်ပါလေ။ ထမင်းစားတိုင်း လျှပ်စစ်ပေါင်းအိုးနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ထမင်းကိုမြင်ရင် မြေအိုးနဲ့ ချက်တဲ့ ထမင်းကို တမ်းတမ်းတတရှိတတ်တဲ့ အဖေ။ မနက်ခင်းစာတွေ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ စားရတိုင်း ငပိဖုတ်နဲ့ ပဲလှော်သုတ်ကို မမေ့နိုင်သေးတဲ့ အဖေ။ သားသမီးတွေကို ဘ၀မမေ့ဖို့ ဘ၀င်မမြင့်ဖို့ အမြဲတမ်းပုံတိုပတ်စတွေနဲ့ သိုင်းဝိုင်းဆုံးမတတ်တဲ့ အဖေ။ အဖေရေ…အဖေပြောပြောနေတဲ့ “ဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာ” ဆိုတဲ့ စကားလေးအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမိတယ် အဖေ။ ပေါ့ပေါ့လေးထင်ရပေမယ့် တကယ့်ကို လေးနက်ကျယ်ဝန်းတယ်အဖေ။ ဒါကြောင့် ကိစ္စတစ်ခုလုပ်ခါနီးတိုင်း ဒီစကားလေးနဲ့ ယှဉ်ပြီးစဉ်းစားတယ်အဖေ။ ဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဖြစ်ခဲ့ရင်ရော..ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အဖိုးတန်စကားလေးအတွက် ကျေးဇူးပါအဖေ။..................
အလုပ်ကိစ္စတစ်ခု ခိုင်းလိုက်လို့မှားလာရင်တောင် ဘယ်တော့မှမဆူ မဆဲခဲ့ပဲ ဥပမာ ဥပမေယျနဲ့ ဆုံးမတက်တယ်။ အဖေပြောနေကြလေ “ ဖိုးဝဲဖောင်တင်လွှတ်သလိုပဲ” ဆိုတာလေ။ ဖိုးဝဲဆိုတဲ့သူကို ဖောင်တင်ရွာခိုင်းလိုက် ဖိုးဝဲရေ ဖောင်တင်က ဦးသာဗျောအိမ်မှာ မျိုးစေ့စပါးလေးသွားပေးချေစမ်းကွာ။ လို့ ပြောရင် စကားဆုံးအောင်တောင်နားမထောင်ဘူး ဖိုးဝဲက ဖောင်တင်ရောက်သွားပြီ။ ဒါနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြီး ဆုံးမတတ်တာ။နောက်ရှိပါသေးတယ်။ “ဖြိုးကြီး ပျိုးနှုတ်သလိုမျိုး” တို့ “ကုလားပုဇွန်ချေးသလို” တို့။ အဖေ့အကြောင်း စဉ်းစားမိရင် တော.အများကြီးပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမွေးနေ့မှာ ပိုပြီးမှတ်မှတ်ယယလေးတော့ ဖြစ်မိတယ် အဖေရယ်။ လွမ်းလိုက်တာများ အဖေရယ် .............
တောစပ်က ရွာနားမှာ ချက်မြုပ်ခဲ.ပေမယ်.
သားသမီးတွေကို မြင်.မားစေတဲ.အဖေ ၊၊
ကိုယ်ကိုတိုင်မြေအိုး နဲ. ထမင်းစားခဲ.ပေမယ်.
သားသမီးတွေကို ကြီးပွားစေချင်တဲ.အဖေ ၊၊
ကိုယ်ကိုတိုင်လမ်း မီးတိုင်အောက်မှာ စာ ကျက် ခဲ.ပေမယ်.
သားသမီးတွေကို လိုတရ စေချင်တဲ.အဖေ ၊၊
ကိုယ်ကိုတိုင် (၉) တန်းလောက်သာတက် ခဲ.ပေမယ်.
သားသမီးတွေကို မဟာဘွဲ. ရ စေချင်တဲ.အဖေ ၊၊
သားသမီးတွေကို ဂုဏ်ဖေါ် စေချင်တဲ.အဖေ ၊၊
ဒီအိမ်လေးတည်ဆောက်ဖြစ်ဖို. တွန်းအားတွေပေး ခဲ.တဲ. အနားမှာ မရှိတော.တဲ. သူလေးရယ်…….
အပြင်မှာမဆောက်ဖြစ်ခဲ.တဲ. အိမ်လေးအတွက် မျှဝေ ခံစားပေးတဲ.သူငယ်ချင်းရယ်…………..
အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အနားမှာရှိနေပေးခဲ.သော ……………
အရာရာကို နားလည်မူပေးခဲ.တဲ. သူငယ်ချင်း များစွာရယ် ကို ကျေး ဇူး တင် စွာ ဖြင်……………………